Hiran State - News: HS:-Magaalada B/weyne oo wadadii horumarka afka saartay iyo maamulka Hiiraan
HS:-Magaalada B/weyne oo wadadii horumarka afka saartay iyo maamulka Hiiraan
HS:-Magaalada B/weyne waxaa ka socda isbedelo la taaban karo oo dhinaca kasta leh sida dhismayaasha casriga ah, nadaafada, difaaca amaba sugida nabadgalyada iyo qurbajoog badan oo dib ugu laabtay gudaha Hiiraan oo halkaasi la tagay hanti si ay u maalgashtaan dhulkooda.
Masuuliyiinta maamulka Hiiraan oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta maamulka ayaa marka hore u mahadceliyey waxqabadka la taaban karo oo ay magaalada B/weyne iyo nawaaxigeeda ka wadan haya'ddaha kala ah ICRC iyo Save the Children oo iyagu quudiya ku dhawaad 15 kun oo qoys oo ay siiyaan raashin iyo lacag cadaan ah.
Magaalada B/weyne markaad dhex joogto uma eka meel hal maalin uu ka dhacay dagaal dadkuna iyagaa hada maamulka kala shaqeynaya nabadgalyada oo kaka horeeya si ay uga hortagaan kooxaha meelaha fog fog ka yimaada ee dadka dhibaateeya si ay magaalada uga dhigaan meel aan amaankeeda leysku haleyn karin.
Maamulka Hiiraan ayaa ku guuleystay in ay si joogta ah ula tashadaan waxgaradka, aqoonyahanada, ganacsatada iyo dhalinyarada ku nool magaalada taasi oo keentay in halmeel looga soo wada jeesto cidkasta oo isku dayda iney carqaladeyso amaanka magaalada B/weyne iyo goobaha ay maamulka Hiiraan gacanta ku hayaan.
Dhinaca kale waxaa socda tababaro ay saraakiisha ciidamada Hiiraan siinayaan dhalinyarada si xirfadooda aqooneed kor loogu qaado, sidoo kale waxaa magaalada ka socda nadaafad xoogan oo xaafadkasta ay qoysaska ku nool iyagu is xilqaameen si ay uga hortagaan cuduro ka dhasha qashinka inta badan gudaha magaalada lagu shubo.
Sikastaba waxaa magaalada B/weyne xiligan la dhihi karaa waa magaalo qaaday wadadii horumarka madama bulshada ku dhaqan ay yahiin dad jecel horumarka iyo dowladnimada waxaana lagu soo waramasya iney halkaasi dhawaan soo gaari doonan waftiyo kala duwan oo ka kala socda Hayadda USIAD, wafti ay horkacayaan masuuliyiinta maamulka Hiiraan iyo waliba wafti aan la shaacin xiliga uu imaan doono Hiiraan oo uu horkacayo masuul aan si rasmi ah loo shaacin wali loosa maleynayo madaxweyne Sahriif.
· admin on July 09 2012 13:45:41 · 0 Comments · 2652 Reads ·
14,584,561 unique visits